Unqulo & Umoya I-Herbalism
Iimveliso zisebenzisiwe ngamawaka eminyaka, kokubili amayeza kunye nezithethe. Yonke imifuno ineempawu zayo ezizodwa, kwaye ezi ndawo zenza isityalo esikhethekileyo.
Tom Meaker / EyeEm / Getty Izithombe
Kubadala, i-apula yayithathwa njengophawu lokungafi. Okuthakazelisayo, kubonakala njengento yokutya kwabafileyo, kungenxa yoko iSamhain ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ngumthendeleko wama-apulo . Kwiingqungquthela zeCelt, i-apula isebe elivelisa iziqhamo, iintyatyambo kunye ne-bud evulekile yayisisihluthulelo somlingo kwilizwe le-Underworld. Kwakhona luphawu lovuno, kwaye lufumaneka rhoqo kwiibingelelo ngexesha lokubhiyozela kweBabon .
KwiBhallad yesiNgesi "uTomas the Rhymer," uTomas omncinci uyalwa malunga nokutya ii-apula ze-Fairy Queen, kuba ukutya ukutya kwabafileyo kungamthintela ukuba angabuyeli ezweni eliphilileyo. Eli bali lisikhumbuza ukuba ii-apula, kunye neentyantyambo zawo, zidibaniswa nommandla we-Fae .
I-apula idlalwa njengecandelo lokuthanda umlingo, kwaye iintyatyambo zingenakongezwa kwii-incense kunye neziphuzo. Kwimiqulu yendabuko, ii-apulo zisetyenziswe njengenxalenye yothando lokubhula - gweba i-apula ngobude obuqhubekayo, kwaye xa umgca wokuqala we-peel uwa, iya kuba ngumntu wokuqala oza kutshata naye. Sika i-apula kwisiqingatha kwaye ubale imbewu - inombolo ithetha ukuba umtshato uza, inombolo engalingani ibonisa ukuba uya kuhlala ungatshatanga ixesha elithile.
Sebenzisa iziqhamo zomthi wase -apula ekuvumiseni , okanye utywala iintyatyambo zibe yitayi. Sebenzisa itiye ukuhlamba ubuso bakho neenwele, ukuzisa uthando indlela yakho. Kwezinye izithethe zeDruid, iintyatyambo ze-apula zixinzelelwe ukukhulula amafutha, kwaye ii-oyile zisetyenziselwa ukudibanisa ukuzisa impilo nokuchuma. Inzala yekhulu leshumi nesikhombisa inxusa ukuxuba i-apple i-extract flower kunye ne-rose yamanzi e-rose kunye namafutha eengulube njengento yokuphilisa isikhumba esomileyo.
I-Pomona yayingumfazikazi wamaRoma wemimiselo yezityalo , kwaye idibaniswa nobuninzi kunye nenzuzo. Ukuvelisa inzala kunye nobuninzi ebomini bakho, hlala iziqabunga zeentyantyambo ze-apula ezisekhaya lakho - ngokukodwa phezu kombhede wakho ukuba uzama ukukhulelwa.
Amanye amagama: Isiqhamo seSiliva, umthi wothando, izithelo zezithixo
Ukuxhamla kobuThixo: uVenus, uAphrodite, uDiana, uApollo, uZeus
Dana Menussi / Getty Izithombe
I-Bamboo ikhulile kwiindawo ezininzi zehlabathi, kwaye ngenxa yokuba iyakhula ngokukhawuleza kwaye ibukhali kakhulu, ineendlela ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukususela kwimida ukuya kwimilingo.
Isityalo se-bamboo sihlala ixesha elide, kwaye siya kuqhubeka sikhula size sivunwe. Ngenxa yoko, ezinye iintlanga zasePacific zesiqithi ziyijonga njengophawu lobomi obude nobomi, kwaye zibandakanya umquba kwimiba ethile yokudala. Kwezinye iindawo zasePhilippines, iintambo ze-bamboo zifakwa emasimini ukuzisa izityalo ezintle ngexesha lokuvuna . Kwiindawo zaseIndiya, i-bamboo ifanekisela ubuhlobo.
Kwezinye iinkonzo zaseMpuma, i-bamboo yiyona nto kuphela eyamkelekileyo kwimicimbi ethile.
Inani lezibongo zaseAsia zibhale izibonda kule sityalo esiqinileyo. Ngokukodwa, ezinye zeebhokhwe zaseJapan zakudala, njengeCho Koran, ziye zavuma iingoma zayo.
Iintyatyambo zibuna, kodwa uhlaza olutsha luvela;
utshintsho lwamaxesha lubangela iinyembezi ukuba zihlambe iimpahla zam.
Ndiyakhumbula ama-cherries kunye namahlumela e-bamboo alungiselelwe ekhishini kude,
Oodadewethu kunye nosapho balamntu omnye. - Cho Koran
Imifuno yemfudu yokukhanya
ukulila iimvula eziluhlaza
ierharnate ziqhakazile zibomvu.
I-bamboo blinds ihlanganiswe
ixesha elingenzi nto
ehleli kwaye ejongene neentaba -
imvula yasentwasahlobo. -Ku Koran
Kwezobugcisa ezininzi zaseMpuma, i-bamboo isetyenziswe njengethuluzi lokuqeqesha. Iinqwelo ezenziwe nge-bamboo, njengeentonga kunye neenkemba, ezifana ne-Japanese shinai . Kwakhona kusetyenziswe ukwakha iimbambo kunye neendonga. Ngenxa yoko, ezinye izithethe zamagqirha zidibanisa u-bamboo ngamandla kunye nomkhondo wemfazwe .
I-Bamboo kulula ukukhula - ngamanye amaxesha ukuya kwinqanaba lokungahambi-abantu abaninzi namhlanje bakhula kwaye bavuna ukuze basebenzise imilingo.
Nazi ezinye zeemilingo ezisetyenziselwa u-bamboo ongazizama:
Ukutshala i-bamboo kwiimbiza ezijikeleze indlu yakho, ukuzisa ubomi obude kunye nempilo enhle kulabo abahlala khona.
Kweminye imikhuba yaseTaoist, i-bamboo isetyenziswe njengendwendwe kwimikhosi ebiza amanzi .
Ukhuphe isiqwenga se-bamboo, sizalise ngeenkcukacha ze- spell uze usityine iiphetshana nge-wax. Yithwale nawe, okanye uyibeke ekhaya lakho, njengoko kuyimfuneko.
Kwi- Encyclopedia yeMagical Herbs , umlobi uScott Cunningham uncoma ukusebenzisa i-bamboo ngokudweba isifiso sakho kwisigxina, uze umngcwabe emhlabathini endaweni ethile. Ukwacebisa ukuba uyisebenzise ukuphula iingqungquthela ngokutyhoboza ukhuni olomileyo libe ngumgubo kunye nokutshisa.
Sebenzisa isiqwenga eside esomileyo njengendlela yokuphatha umlingo wesidlo , kwaye ususe amandla angaphandle ekhaya lakho.
EJapan, iindonga ze-bamboo zikholelwa ukuba zikhusela izithixo zeShinto ezivela kwimimoya emibi. Ukutyala umqolo wabo kwididi yakho, okanye kwiiphothi kwiifestile zakho, ukugcina amandla angasebenzi.
Fumana iindlela zokufaka i-bamboo zibe zixhobo zamagqirha, njengeekomityi, i-wins, kunye nabacwangcisi beemifuno zakho.
I-basil yaziwa ngokubanzi nakubanzi njengomthi wezolimo, kodwa iqulethe izinto ezinomtsalane. Emazweni aseMeditera, i-strewn on floor ihlambulula ikhaya. Kwakhona kunokuzisa inhlanhla kubantu abafudukela kwindawo entsha yokuhlala-isipho sesityalo se-potil esenziwe ngombumbi siqinisekisa inzuzo enhle. I- Herbal Grieve's Modern Herbal ithi igama elithi "basil" lingavela kwi- basileus yaseGrike, ukumkani, kuba 'iphunga layo lihle kakhulu ukuba lilungele indlu yenkosi.' Izityalo zaseBasil zitsho ukuba zitsalise ama-scorpions, kwaye kwezinye iindawo zazikholelwa ukuba ukuvumba isityalo kunokubangela ukuba i-scorpion ikhule ebuchosheni.
Kwamanye amazwe, kunjalo, i-basil ithathwa njengento ethile amadoda ayinyaniyo - kutheni? Ngenxa yokuba idibene neetayi ezisetyenziselwa ukubonelela ukukhululeka kwimizuzu ebuhlungu yokuya esikhathini.
Ngokusemgangathweni, i-basil ingasetyenziselwa ukuthanda umlingo kunye nokuthanda ukubhula. UScott Cunningham uthi kwi- Encyclopedia yeMagical Herbs ukuba amaqabunga amabini e-basil afakwe kwilahle lamanzi aya kukunika isibonakaliso malunga nobuhlobo bobudlelwane bakho: ukuba bayitshisa ukuze baqhume ngokukhawuleza, umtshato uya kuhambelana, kodwa xa udibanisa, umtshato wakho uya kubaphazamisa.
I-Basil ingasetyenziselwa ukuqinisekisa ukunyaniseka - okanye ukufumanisa ukungabikho kwayo. Ukuba uyakrokrela ukuba umthandi wakho uphume, faka ikhefu entsha yekhefu esandleni sabo. Ukuba iphosa ngokukhawuleza, amathuba okuba sele esasaza uthando olujikeleze. Ukugcina iqabane lakho okanye iqabane elithembekileyo, lifafaze i-basil epholiweyo ebhedini ngelixa balele-ngokukodwa malunga nentliziyo-kwaye baya kuhlala beyinyani kuwe.
Amanye Amagama: I-Wort yaseJoseph, i-Witches Herb, i-American Dittany
Ukuxhamla kobuNtu: iMars, Krishna, Vishnu, Ares
Ukuba unquma ukutshala enye indawo, ungakhathazeki - kulula kakhulu ukukhula. Nangona kunjalo, kubanda kakhulu, ke qiniseka ukuba ulinde kude emva kweqabunga lokugqibela, kwaye uvuno zonke izityalo zakho ngaphambi kokubuya kwemozulu.
Kukho umxholo waseJamani othi i-nightshade ingoMtyholi uqobo, kwaye uyahamba ngokuwujikeleza unyaka wonke. Umfanekiso © Bob Gibbons / Photodisc / Getty Izithombe
Nightshade, eyaziwa nangokuthi nguBeldonna, isityalo esifumaneka kwiindawo ezininzi ze-Yurophu ephakathi, kwaye iyalinywa eMntla Melika naseNgilani, nangona iyanzima kakhulu ukufumana kwiiBritish Isles. Isityalo ngokwawo, ngezinye izihlandlo esibizwa ngokuba yi-Deadly Nightshade, sinezimpande, ezinamaqabunga amnyama, kunye namajikijolo amnyama afana nama-cherries.
Ngokusemgangathweni i-Nightshade iqukethe i-alkaloid (i-atropine) enokuthi ibe yityhefu kwimiqathango encinci . Okuthakazelisayo, ingcambu yona nto iyingozi kakhulu kuyo yonke indawo yesityalo. Kukho iingxelo ezininzi kwiiminyaka yabantwana abadla amajikijolo akhangayo kunye noBelddonna ubuthi, obunokubulala.
Kukho umxholo waseJamani othi isityalo sikaMtyholi uqobo, kwaye uyahamba malunga nokuguqula iminyaka yonke - ngaphandle kweWalpurgisnacht , xa elungiselela i-sabbat. I sityalo sibheka kwimbali yaseScotland - kuthiwa amajoni kaMacBeth akwazi ukutyhekela umkhosi wonke weDanes ngokuxuba uBaladonna kwisiselo esiluncedo ngethuba lexeshana. Xa amaDanes awela "ebuthongweni obukhulu," babulawa ngamaqela aseScotland.
I-Atropine inokukhishwa kwisityalo seNightshade, kwaye isoloko isetyenziswe kwisimo sezonyango. Kuye kwabandakanywa kwonyango lweziliso zeso, kwaye yinto yokudalwa kwemvelo kunye neengxaki zonyango. Ukusuka kwimiboniso yemilingo, kukholelwa ukuba i-nightshade yayisetyenziswa njengenye yezinto ezisebenzisayo "kwioli ehambahambayo" esetyenziswa ngabathakathi bexesha elidlulileyo. Kwakhona kudibaniswa neengcamango kunye nokuhlolwa kweengqondo. Ngenxa yezinto ezinobungozi zesityalo, ngokuqhelekileyo kucetyiswa ukuba oogqirha banamhlanje baphephe ukusebenzisa kwawo.
Gcina ukhumbule ukuba isityalo uBeldonna, nangona kuthiwa yiNightshade, akufanele idideke kunye nezinye izityalo ezingamalungu omndeni osondelene. Izityalo kwintsapho yase-nightshade zivelisa uhlobo oluthile lwe-toxin oluvimbela abagxeki begadi kunye nezinambuzane ukuba bangadli, kwaye ngokuqhelekileyo abakonakali kubantu. Ugwayi, iitapile, i-pepper eluhlaza, utamatisi, kunye ne-eggplants ziyingxenye yentsapho ye-nightshade yezityalo, kwaye akufanele idideke no-Belladonna.
Ii-Buckeyes zidibene nokuninzi kwemali kunye nomlingo wemali. Umfanekiso nge-larigan - Patricia Hamilton / Moment Open / Getty Izithombe
I-Buckeye, okanye i- aesculus glabra , ifumaneka kwiindawo ezininzi zaseMidwestern, kuquka ne-Ohio, ebizwa ngokuba yi-State Buckeye. Nangona le ncoko ekhunileyo iyinto enobuthi kakhulu ekusebenziseni abantu, i-squirrels ibonakala iyifumene. Amantongomane aqala ukuwela apha ngasekupheleni kukaAgasti, kwaye ngokuqhelekileyo awele phantsi ngokupheleleyo kwiiveki ezintathu ukuya kwezine.
I-Buckeye iye yadibaniswa iminyaka ngemali kunye nokuchuma , ingakumbi xa kufikelele ekungcakazeni. Ukuphumelela kwiitheyibhile zokudlala, okanye ukuzisa imali yakho indlela, uphathe iBuckeye ephaketheni lakho. Bhuqa ngenhlanhla phambi kokuba uqhube idayisi. Umlobi uScott Cunningham watyusa ukufaka enye kwibhilikhi yeli dola aze ayithwale kwi-sachet, kwi- Encyclopedia yeMagical Herbs .
Ukuba unako ukuqokelela i-Buckeyes, unokuwomisa ukusetyenziswa kwangomso ngokuwabeka kwi-baking sheet ehovini ngokushisa okuphantsi (malunga nama-degrees angama-200) malunga neyure. Ukuba awuwomise, baya kugqitywa, ngoko qi niseka ukuba uyomisa xa uceba ukugcina ixesha elide.
Ayikho imithi yaseBuckeye kufuphi nawe? Akukho maxhala! Yenza i-batch yezinto ezidliwayo ngaphandle kwebhokisi ye-peanut kunye ne-tshokoleta, kunye nale recipe ye-Ohio! Candy Buckeyes. Njengoko udibanisa izithako, gxininisa injongo yakho ngobuninzi, ukuze ukwazi ukwabelana nabo nabahlobo bakho kunye nosapho.
Xa uxhomekeke emnyango wakho, inqwaba ye-catnip ikhangele inhlanhla. Xa ityalwe kwintsimi yakho, iyakhanga iikties. Imifanekiso ngemifanekiso yezemfundo / i-UIG yeZithombe zeZonke / i-Getty Izithombe
I-Catnip ineyona iphunga elimnandi kubo, elifana nesiphumo ku-Pennyroyal kunye neMint. Ngenxa yokunuka kwayo okunamandla kunye nokungaqhelekanga, i-catnip inomdla ongathandabuzekiyo weekati, oya kuwugubungela phantsi kwi-nubs (kwaye ujikeleze phezulu kwayo) nayiphi na ithuba. Ngokutsho kukaMaud Grieve's Herbal Modern , kukho ilizwi malunga ne-catnip:
Ukuba usibeka, iikati ziya kuyidla,
Ukuba uhlwayela, iikati azizi.
Ukongezelela ekubeni yiphatha ngokupheleleyo kubangani bakho abanomlilo, i-catnip inezinzuzo ezininzi zonyango. Ingumgubo onobuhle, kunye neentaba ze-Ozark, kukho inkcubeko yokunika i-colicky iintsana i-catnip itiye yokukhanya ukuze ihlalise. Okuthakazelisayo kukuba, uMichel Laguerre uthi kwi- Afro-Caribbean Folk Medicine ukuba kusetyenziswe okufanayo eHaiti, apho i-catnip inikwe abantwana ukuba bahlambulule igazi.
Ukuba unika i-catnip yakho encinci, abanye abantu bakholelwa ukuba kuya kunceda ukuqinisa ubuhlobo bentliziyo phakathi kwakho, ngaphezu kokufumana ikati lakho eliphakamileyo njengekite. Nangona esetyenziswa ngokusetyenziswa kwintwanyana, i-catnip nayo ingumquba wothando, kwaye ingafakwa kwiingxowa okanye isiqhumiso . Kwezinye izithethe zamagqirha, indawo eyamkelekileyo yokusebenza ebandakanya amalungu entsapho yentsapho.
Amanye amagama: I-Catmint, i-Wort Wort, ne-Nepeta
Uxhumano lobuThixo : Bast , Sekhmet
Umfanekiso ngeWestend61 / Getty Izithombe
Ezi zibini eziqhelekileyo zibonwa iindidi ze-chamomile, okanye i-camomile, ziintlobo zaseRoma kunye neJamani. Nangona iimpawu zazo zihluka kancinci, zifana nokusetyenziswa kunye neempawu zomlingo. Ukusetyenziswa kwe-Chamomile kuye kwabhalwa njengasekuqaleni kweYiputa yaseYiputa, kodwa kwakunjalo ngeli xesha legadi yaseYurophu yasensimini. Abagadi belizwe kunye nabasendle belizwe bayazi kakuhle ixabiso le-chamomile.
Emuva e-Eden , uJethro Kloss uncoma wonke umntu "ukuqokelela ingxowa yeentyantyambo zekhamile, njengoko zilungele izifo ezininzi." Le nkunkuma yonke injongo isetyenziselwe ukuphatha yonke into ekulahlekeni kwesidlo ukuya kwixesha elingavumelekanga ukuya kwi-bronchitis kunye neepompo. Kwamanye amazwe, ixutywe kwi-poultice kwaye isetyenziselwa ukuvula amanxeba ukwenzela ukukhusela i-gangrene.
I-Chamomile iyaziwa njengomhlaza wokucoca nokukhusela, kwaye ingasetyenziselwa ukulala nokucamngca . Yiphule ngeenxa zonke kwikhaya lakho kwiwadi ngaphandle kokuhlaselwa kweengqondo okanye imilingo. Ukuba ungumngcakazo, geza izandla zakho kwiitomile teyi ukuqinisekisa ukuba inhlanhla enkundleni yokudlala. Kwimizekelo yamasiko omlingo, ngokukodwa abo baseMerika asezantsi, i-chamomile yaziwa njengentyantyambo inenhlanhla-yenza igrafu ukuba igqoke iinqwelo zakho ukutsala umthandi, okanye ubeke enye ephaketheni lakho ngenzuzo enkulu.
Amanye Amagama: Iiplethi eziphantsi komhlaba, isityalo se-Whig, iMeyi, iComomile yaseRoma
Ukuxhamla kobuNtu: uCernunnos , Ra, Helios
I-Clover ibonakala ibonakaliso njengenjongo yokufumana inzuzo. Umfanekiso nge- PLASTICBOYSTUDIO / Moment / Getty Izithombe
Kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo zee-clover, kodwa ezaziwa ngokuqhelekileyo ziimpawu ezibomvu kunye ezimhlophe. Ngokuqhelekileyo, zinamaqabunga amathathu, kodwa rhoqo emva kwexeshana kukho umda ovelisa ezine, okanye amaqabunga amahlanu endaweni yawo.
Ngokuqhelekileyo, xa abantu basebenzisa igama elithi "shamrock," bacinga ngeentlobo ezinamaphepha amaqabunga amathathu omhlophe. Injabulo: igama elithi shamrock livela kwi-Irish Gaelic seamrog , elithetha "i-clover encinci." E-Ireland, i-shamrock enamaqabunga amathathu ibe ngumqondiso wesizwe, kwaye ibonisa uBathathu Emnye wobuKatolika .
Kwimichiza yabantu baseYurophu, i-clover isetyenziswe ngeenkulungwane kwiminyaka eyi-diuretic. I-clover itiye idla ngokugqithiselwa izigulane ezineengxaki zokugaya izigulana - ukuzithiba, iingxaki zesibindi, kunye nesondlo esingenasiphelo sonke siphethwe nge-clover. Kwamanye amazwe, iintyatyambo zihlanjululwa ukuze zivelise unonophelo oluthile, olusetyenziselwa kwizifo zesikhumba ezifana nezilonda ezivulekileyo okanye unyawo lomdlali. Ngokuqhelekileyo, iintyatyambo zezilwanyana ezimhlophe ziye zasetyenziswa njenge-cleaner system.
I-Clover isondlo, ngokunjalo. Zama ukongeza amaqabunga, iziqu okanye iintyatyambo ngexesha elizayo xa wenza isaladi eluhlaza! Ezinye iintlobo ze-clover zinomdla we-lemony kumaqabunga azo. Ngokukodwa i-clover ebomvu ilungile kuwe-yaziwa ngokuba igcwele i-calcium, i-potassium kunye nezinye izondlo ezibalulekileyo.
Kwiinkoliso ezininzi zezolimo, ukukhula okunzima kwe-clover kubonwa njengomqondiso wefama ephumayo-nangona kunjalo, oku kungenzeka kukuba i-clover yintlanzi yokuthanda iinkomo neyezimvu, eziye zishiya i-droppings, idale umhlaba ophilileyo kunye oqinile.
Ukuthetha ngesigxina, i-clover ibonakala ibonakalisa inhlanhla kunye nenhlanhla. Kwamanye amazwe aseScandinavia, isetyenziselwa ukukhusela imimoya emibi kunye nokunceda umbonisi athuthukise amandla abo angqondo. Hlanganisa umthwalo phezu komnyango wakho ukuze ugcine izinto ezingekho phantsi, okanye uzitshale phambi kweyadi, malunga nomda wepropati yakho.
Yithatha i-clover eyomileyo kwi-wallet yakho ukuzisa inzuzo yemali indlela yakho, okanye uyigcine ephaketheni lakho xa udlala kwitafile yokudlala. Ngenxa yezinto ezihlambululayo, unokumisa i-clover enye kwaye uyitshise njengokuba ungayifumana okanye i-sweetgrass, njengenxalenye yesithethe sokuhlamba okanye sokuhlambulula .
I-fragrance isetyenziselwe iwaka leminyaka. I-Credit Credit: Danita Delimont / Gallo Izithombe / Getty Izithombe
I-Frankincense ngenye yeemithombo ezindala kakhulu zemilingo ezinokudala - zithengiswa kumntla Afrika kunye neengxenye zehlabathi le-Arabhu malunga neminyaka engamawaka amahlanu. Eli qhekeza, evunwa kwintsapho yemithi, ibonakala kwibali lokuzalwa kukaYesu. IBhayibhile ixelela ngala madoda amathathu alumkileyo, afika emkhombeni, "avula ubutyebi bawo, amnika izipho, igolide nenqenqatha nemure." (Mateyu 2:11)
I-frankincense ichazwe ngamaxesha amaninzi kwiTestamente Endala nakwi -Talmud . AbaRabi abangamaYuda basebenzisa intlaka yokuqhumisela ingcwele, ngokukodwa kwiminikelo kaKetoret, eyayiyingcwele kwiNdlu yeYerusalem. Igama elithile le-frankincense yi- olibanum , ukusuka kwisi-Arabhu al-lubān . Kamva wazisa iYurophu ngabaMnqophiso, i-frankincense yaba yinto ebalulekileyo kwiimisitho ezininzi zamaKristu, ngokukodwa kwiicawa zamaKatolika nama-Orthodox.
Emuva ngo-2008, abaphandi bagqiba isifundo malunga nefuthe le-frankincense kwixinzelelo nokuxhalabisa. Abafundi be-Pharmacologists kwiYunivesithi yesiHebhere yaseJerusalem bathi ubungqina bubonisa ukuba iphunga le-frankincense lingasinceda ukulawula iimvakalelo ezifana nokuxhalaba nokuxinezeleka. Uphando lubonisa ukuba amagundane ebhabhi abonakaliswe kwintlaka yokuqhumisa befuna ukuchitha ixesha kwiindawo ezivulekileyo, apho bavakalelwa khona. Iingcali zenzululwazi zithi oku kubonisa ukuhla kwezinga lokuxhalabisa.
Kwakhona njengenxalenye yocwaningo, xa amagundane ebhukuda kwi-beaker engenawo ndlela yokuphuma, "i-paddled ixesha elide ngaphambi kokuyeka kunye nokuthambile," ezo zenzululwazi ezidibeneyo kwiinkampani ezixhatshazwayo.
Umphandi u-Arieh Moussaieff uthe ukusetyenziswa kwenkunzi yempepho, okanye ubuncinane, uhlobo lwalo lwe- Boswellia , luyabhalwa emva kweTalmud, apho kugwetywa khona amabanjwa anikwe intlaka yokunqanda inkobe yewayini ukuze "ayenze iinjongo" ngaphambi kokubulawa .
Iingcali zase-Ayurvedic ziye zasebenzisa intlaka yenqwanqwa ixesha elide. Bambiza ngegama laSanskrit , i- dhoop , kwaye libandakanya kuyo kwimikhosi yokuphulukisa nokuhlambulula .
Kwizithethe zamangomso zanamhlanje, inkunzi yempepho isetyenziswe rhoqo njenge-purifier - itshise i-resin ukuze ihlambulule indawo engcwele, okanye isebenzise ioli efunekayo ukuthambisa indawo efuna ukuhlanjululwa. Ngenxa yokuba kukholelwa ukuba amandla enzantyikwano yobhankqalazo anamandla kakhulu, abantu abaninzi baxuba inkunzi yempepho kunye nezinye izityalo ukuze banike amandla omlingo. Abantu abaninzi bafumanisa ukuba yenza isiqhumiso esipheleleyo sisebenzise ngexesha lokumiswa, umsebenzi wamandla, okanye izenzo ze-chakra ezifana nokuvula iso lesithathu .
Kwezinye iinkqubo zeenkolelo, intlaka yemfutho inxulumene nenzuzo enkulu kwishishini - ithwala iimbombo ezimbalwa ze-resin ephaketheni lakho xa uya kwintlanganiso yebhizinisi okanye udliwano-ndlebe.
* Inqaku elisixwayisayo malunga nokusetyenziswa kwamafutha abalulekileyo: iioli ze-scalpenti ngamanye amaxesha zingabangela ukuphendula kubantu abanesikhumba esicalukileyo kwaye kufuneka zisetyenziswe kuphela ngokukhawuleza, okanye zihlanjululwe ngeoli engundoqo ngaphambi kokusetyenziswa.
Neil Fletcher / Getty Izithombe
U-Comfrey uyimifuno enobungakanani obunokuthi ukhule ngokukhawuleza kumyezo wakho okanye kwisitya, kwaye uvune uze ume ukuze usebenzise . Kuya kukhula malunga naliphi na (nangona kubonakala kungenalutho kwiindawo ezinomthunzi) kwaye sele isetyenziswe kwiyeza ixesha elide. U-Comfrey unembali yesityebi somntu.
Ukusetyenziswa kwamagqabi e-comfrey njengengxowa yokulimala kunye nokuvuvukala kwaba yintando phakathi kweeMinyaka ephakathi.
Kungasetyenziselwa ukuvula amanxeba, njengezilonda kunye nezilonda, emva kokuxutywa kwi-paste kunye nefuthe. Oogqirha basebenzise ukungenisa kwamanzi e-comfrey njengesiselo kwizigulane zabo eziphethwe zizifo zamapulmoni, kuquka ukukhwehlela.
I-Herbalist uNicolas Culpeper inikezela le nkcazelo elandelayo yezinto ezininzi zokusebenzisa i-comfrey: "Isiraphu eyenziwe yinto enemiphumo efanelekileyo ngaphakathi, kunye namanzi adibeneyo ngenjongo efanayo, nangaphandle kwimixeba okanye izilonda kwiindawo ezinomzimba okanye ezinamafutha umzimba, kunye nokukhawulelana neengxabano kunye nokunciphisa ubukhali be-humours. I-decoction yamacembe ayilungele ezo njongo, kodwa ayinakwenzeka kangangoko njengeengcambu ezibekwe ngaphandle kwezilonda zamanzi okanye izicucu ngokukhawuleza, ziphazamise kwaye zibekwe kuyo; kwaye kulungele ukuphuka kunye namathambo aphukile ... "
U-Comfrey unenombolo yeenjongo kwimilingo yomntu. Unxulumene nabahambi-mhlawumbi ngenxa yokusetyenziswa kwonyango lokulimala kunye namathambo aphukileyo - kukholelwa ukuba ukugcina i-comfrey kumntu wakho kuya kukugcina ukhuseleko xa uhamba.
Ngokufanayo, ukucima amaqabunga ambalwa kwimithwalo yakho kuya kukuthintela ukuba ilahleke okanye ichitheke.
Kwezinye izithethe zamagqirha, i-comfrey idibene nokuphulukiswa nokuhlanjululwa - unokuyisebenzisa kwimilingo ehambelana nokuphilisa, amaqabunga omisiwe anqabileyo , okanye wongeze kwindawo yokuhlambela ngaphambi kokuba uhlambuluke . U-Comfrey udibaniswe nokubhula nesiprofeto, mhlawumbi ngenxa yokuba inxulumene noHecate, unkulunkulukazi wezobugqirha . Ungongeza i-comfrey kumlilo oqhelekileyo wokusetyenziswa kunye nokubhula nokukhwankqisa - ukuba awuyithandi iphunga xa livutha, lilinganise ngezinye izinto, i- mugwort okanye i-rosemary.
Ekugqibeleni, ungasebenzisa i-comfrey ukulala nokuphupha amaphupha. Faka enye kwi-sachet kwaye uyibeke phantsi komsila wakho ngexesha lokulala, okanye ugcine umkhombe we-live comfrey kwi-nightstand yakho ukuze ukwazi ukunandipha iphunga njengoko ulala ebusuku.
* Iphulo lokukhusela: I-Comfrey ingaba yityhefu kumakati, kodwa ngenxa yokuba yinto enqabileyo, inqwenela ukuyibeka kuyo. Ukuba unemfuyo, qhubeka u-comfrey ngaphandle kokufikelela kwabo.
I-hyssop yayingcwele kubadala, ngokuyinxalenye yezakhiwo zayo zokuhlanjululwa. Umfanekiso ngoSteve Gorton / Dorling Kindersley / Getty Images
I-Hyssop inomsuka wamaGrisi, kwaye ngokutsho kukaDioscorides, yayisetempileni ukucoca izikhala ezingcwele. AbaRabi abangamaYuda basebenzisa iminyaka engamawaka amabini edlulileyo ukuhlambulula iintempile ezingcwele zaseYerusalem. AmaSirayeli nawo asebenzisa ihisophi yokufafaza, kwaye empeleni iindinyana zibhalwe kwiimfundiso zecawa zamaYuda ezichaza ukuba yeyiphi iifusi zamaHope ezahlukahlukeneyo. Ekubeni ixesha lobuKristu laqala, i -sopop yayisetyenziselwa ukuhlanjululwa kwabaqhenqa. Kubonakala eBhayibhileni , xa uDavide wathi, "Ndihlambe ngehisope, ndihlambuluke."
Kwixesha le-Renaissance-eYurophu, i-hyssop yayivame ukusetyenziswa njengomoya ohlaziyekileyo ngendlela efanayo nathi namhlanje. Kwakuqhelekile ukuhambisa amaqabunga e-hyssop otyumkileyo kunye neentyantyambo ezijikeleze indlu, ngokukodwa kwiindawo zokugula, ukufihla iphunga elimnandi - emva koko, ukuhlamba imihla ngemihla kwakungabonakali. Ekugqibeleni, xa ukuhlamba kwanda kakhulu, ihisophi yayisetyenziswa kwiindawo zokugula ngenxa yokuphulukiswa kwayo. Ngokukhawuleza, kwaye kwabulala inqanawa yomzimba, eyayininzi ngexesha.
Ukhulelwe ekhaya, ihisophi inokukrazula indlu yokungahambi kakuhle. Yongeza kwi-sachet okanye ngamanzi ukufaka okanye ukufafaza abantu abanesidingo sokuhlanjululwa. Kwakulungile ukusetyenziswa ekuzikhuseleni kwemilingo - zithwale ephaketheni lakho, okanye usasaze malunga nomda wepropati yakho ukuze ungeze umgca wokukhusela umlingo.
Amanye amagama: Yssop
Ukuxhamla kobuNtu: Naluphi na unkulunkulu owenzelwa ukukhuselwa okanye ukuhlanjululwa
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zehisophi, kodwa ezininzi zazo zivela eMiddle East naseYurophu, kwaye ziya kukhula kwiintlobo ezahlukeneyo zomhlaba. Ngokwenene isityalo esilula kakhulu ukuba sikhule, kwaye sigqibelele abo bancinci kwesithupha. Hlani ihisophi kwiimbiza ngaphandle kweminyango yakho, kwaye ugcine amandla angenayo ukungena endlwini.
SVGiles / Getty Izithombe
Ukusetyenziswa kweLavender kuye kwabhalwa ngamawaka eminyaka. UPliny Umdala uthi iintyatyambo zalo, ezibizwa ngokuba nguAsarum, zathengiswa ngeenariyari ezilikhulu zamaRoma. AmaGrike athiwa yiNardus, emva kwesixeko saseSiriya kumanxweme e-Ewufrathe. Yayisetyenziswe ngabantu bamandulo ekuhlambuleni amanzi okuhlambela, kunye nokufakela phantsi kweetempile nezindlu. Yayilinywa eNgilani ngokokuqala ngqa malunga ne-1560, kwaye ikhankanywe kwiincwadi zikaWilliam Shakespeare.
Ngonyango, i-lavender ininzi isebenzisa. Uthiwa u-herbalist uNicolas Culpeper uncoma "i-decoction eyenziwe ngeentyantyambo zeLavender, Horehound, iFennel kunye ne-Asparagus root, kunye neCinnamon encinci" ukunceda ukuhluthwa nokunye ukuphazamiseka kwengqondo. I-tincture ye-lavender iye yaqatshelwa ngokusemthethweni njengonyango kwi-British Pharmacopceia ngeenkulungwane ezimbini. UJudith Benn Hurley ubhala kwi -Good Herb ukuba ngekhulu leshumi elinesithandathu, ama-English abathandi be-lavender basebenzisa i-lavender bayifake kwi-cap njengokonyango lweentloko, kwaye baxhasa ukusetyenziswa kwamathambo ayo njengendlela yokugcina amanxeba ahlambulukileyo nokukhusela intsholongwane.
Ukuthetha ngomlomo, i-lavender idla ngokudibanisa nothando, kunye nokusebenza ukuzisa uxolo noxolo. Ukuzisa uthando lwakho indlela, thwala i-lavender ngeentyantyambo kwi-sachet kumntu wakho, okanye uxhomeke iintonga zekhaya lakho. Ukufumana ubuthongo obuhle bobusuku, ngokuphupha amaphupha, ubeke umququ ngeentsimbi ze-lavender. Ingasetyenziswa kwakhona kwibhedi yokuhlanjululwa okanye isithethe esichukumisayo.
Amanye amagama: i-Nardus, iqabunga el-Elf
Uxhumano lwePlanethi: iMercury
Yenza i-Lavender Dream Pillow
I-mandrake yaseMelika, okanye iifapu, inokufumaneka ikhula kumahlathi amaninzi. Umfanekiso nguSJ Krasemann / Photolibrary / Getty Izithombe
I-American Mandrake, eyaziwayo njenge-hog apple kunye neenyawo zonyawo, yenye yezo zityalo kunye nembali emide kunye nemibala emininzi eMelika. Ngokomlando, isetyenziswe njengamayeza kunyango lweengxaki ezinxulumene nesibindi kunye namathambo, kunye ne-cathartic. Kubalulekile ukuqaphela ukuba kukho ezimbini iintlobo ezahlukeneyo ze-mandrake; I-mandrake yaseMelika kunye neYurophu zinjalo izityalo ezimbini ezingafaniyo kunye nezityalo.
Ingcambu iyingxenye yesityalo esisetyenziselwa unyango, kwaye ingaba yingozi xa ithathwa kwiidayiti ezingaphezulu. Abafazi abakhulelweyo akufanele baphinde batye i-mandrake, njengoko kunokukhokelela ekukhuselweni kwabantwana abangakazalwa. Iimpawu zaso zengqungquthela zenze i-poisonity etholakale kwiindawo ezininzi zasendulo. Ngokutsho kukaJohn Lust kwi -Herb Book , ngezizwe zakwaMerika zaseMelika zasebenzisa ngezinye iinkqubo i-mandrake ingcambu yokuzibulala.
I-mandrake yaseYurophu iyalelwa kummandla waseMeditera, kwaye uPliny Umdala usitshela ukuba ingcambu yayo yayisetyenziswa ngabagqirha basendulo njengesiqhelo se-anesthetic, kwaye njengesiqhamo sokuzala. Namhlanje, ngamanye amaxesha kufumaneka kumayeza athile njengendlela yokulungisa isifuba nokukhwehlela. Njenga-mandrake yaseMelika, ingcambu ingabunobuthi. Ngenkulungwane yeshumi elinesibhozo, i-mandrake yenze indlela eya kwiiNgesi zonyango.
Xa kuza kwi-folklore, i-mandrake iyakhathazeka kakhulu. Inani elincinci lamanzi, njengeHerbarium yeApuleius lithetha ukusetyenziswa kwe-mandrake ingcambu njengonyango lwelifa lemademoni. Kukwacetyiswa kwakhona njengothintelo lokuphanga. Ngokuqinisekileyo, le ngcamango ingenzeka ngenxa yeengcamango zokuba iminyaka engamakhulu ambalwa edlulileyo, ukugula kwakubonwe ngezinye iinkqubo njengobungqina bempembelelo yamademoni - sebenzisa i-mandrake, ukukhupha iidemon, ukugula kuhamba.
I-Mandrake yaba isithako esidumileyo kwimilingo kuba iingcambu zivame ukufana nomntu - umzekelo wokuqala wobugqi bamatshini. U-Maud Grieve uthi kwi -Modern Herbal ukuba izimpande ze-mandrake zisetyenziselwa ukumela imbonakalo yendoda eneendvuvu, okanye insikazi eneentloko zeebhokhwe, ezinwele zasendle.
Uyaqhubeka athi isityalo sasivezwa ukuba sikhule ngaphantsi komthi we-hangman, kwaye "kwakukholelwa ukuba kukufa ukumbamba ingcambu, okwakuthiwa ukuthetha ngokukrakra nokukhwankqisa okubi kakhulu, ekungekho mntu unokuva kwaye baphile. "Abafaki beencwadi zeJar Rowling zikaHarry Potter baya kuqonda i-mandrake njengezityalo ezikhulayo kwiindawo zokugcina izityalo zikaMadame Sprout.
Sebenzisa i-mandrake ekhaya lakho ukuze ugweme amandla amandla. Cinga ukutshala malunga nomda wepropati yakho njengemqobo, okanye ubeke ezinye phantsi komnyango wakho wokukhusela kunye nokuzala. Ezinye izithethe ze- hoodoo zincoma ukufaka ingcambu ye-mandrake yonke kwi-bill dollar kwaye uyithwala ephaketheni lakho ngenzuzo yemali.
URon Evans / Getty Izithombe
I-Mugwort yimihla efunyanwa ngokufanelekileyo kwiindlela ezininzi zamandulo zobugqi. Ukususela ekusebenziseni kwayo njengeqhumiso, ukugubha, okanye ukuphala, i-mugwort yinto ehambelanayo kakhulu-kwaye kulula ukukhula.
Ingxenye yentsapho ye- artemisia , i-mugwort yayisetyenziswa e-Anglo-Saxon eBrithani ukuphilisa abantu abaye bawela kwi-"elf shot," ebonakala ngathi yinto yokubamba-yonke ixesha elisetyenziselwa ukufaka izicelo kubantu abagulayo, ukugula kwabo kwiintolo ezingabonakali zeFae.
I-Bald's Leechbook , isityalo esivela ngasekupheleni kwekhulu lesithoba, ibhekisela ekusebenziseni igwort ukukhupha iidemon. Umlobi uphakamisa ukutshisa ilitye elikhulu kwindawo yokucima umlilo, ufefe ngegwort, kwaye ungeze amanzi ukuze udale umsi womgulana ukuze uphucule.
Kwezinye izithethe zamagqirha, i-mugwort idibene nokubhula nokuphupha. Ukuba umntu uphuphaphule amaphupha, angakwazi ukulinganisela kunye nokuhlamba okuqhelekileyo okwenziwe kwi-mugwort kwaye wangena ngaphambi kokulala. Ukuzisa isiprofeto kunye nempumelelo yokuqhayisa, yenza isiqhumiso somugwort ukutshisa kwindawo yakho yokusebenzela, okanye ukuyisebenzisa ngeentonga ezijikelezayo kwindawo owenza ngayo ukubhula.
I-Mugwort idla ngokuqhagamshelana nenkqubo yokuzala, mhlawumbi ngenxa yobambiswano kunye nenyanga, kwaye ingasetyenziselwa ukuzisa ukukhawuleza kokuya esikhathini.
QAPHELA: Kunconywa ukuba abafazi abakhulelweyo bangathathi igugort ngaphakathi, kuba kungakhokelela ekuphumuleni komzimba.
Izizwe zaseMelika zaseMelika zasebenzisa amaqabunga ama-mugwort ukuze zihlabe umzimba womzimba njengokhuselo ezigodini.
Amaqabunga anokugqithwa njengentsimbi.
Olunye usebenzise imilingo:
Sebenzisa i-mugwort yokubhabha okanye isiqhumiso kwimikhuba ejolise ekuphatheni uxinzelelo.
Yenza isethi yeentonga ze-smudge usebenzisa i-mugwort eyomileyo, ukusetyenziswa kwisetyenzisi sendlela esenza isiprofeto okanye iimfuno zokuqhawula.
Faka i-mugwort phantsi komsila wakho ukukhusela ukuhlaselwa kwe-astral, okanye ukukhusela ukuhlaselwa kwengqondo kulabo abanokukulimaza.
I-plant mugwort kumyezo wakho ukukhangela i-Fae .
Burn mugwort njengenxalenye yesibingelelo sokuqhumisela uLitha.
Yenza ioli ekhuselekileyo kwikhaya lakho kunye nepropati ngegwort.
Yenza umlingo womlingo okanye ugubungele i- mugwort eboshwe kuyo, kwaye uyisebenzise ukutshabalalisa amandla angenawo ekhaya.
Sebenzisa i-oregano kumatshini ekhitshini kunye nokukhuselwa kwendawo yokulala kunye nekhaya. Umfanekiso kaPatti Wigington 2010
I-Oregano iyayaziwa ngokusetyenziswa kwayo kwenkcubeko, ngoko ibe yintandokazi kunye nabasimili bekhitshi. Nangona kunjalo, njengazo zonke izityalo, zinemiklamo yemilingo kunye, ngoko kutheni ungayisebenzisi ngoku kusebenza kwakho? Hlanganisa i-oregano ekuphekeni kwakho kunye nomlingo wakho ngexesha elifanayo, ngenxa yekhitshi elithile lokukhwabanisa .
Igama elithi "oregano" ngokwenene libhekisela kwintlobo yezityalo ezibandakanya inani leentlobo ezahlukeneyo. Ilizwi livela eGrisi, apho ii- oros kunye ne- ganos zidibanisa kuthetha "intaba entlalweni." AmaGrade aseMaphandleni atyhola imibhangqwana esandula kutshata kunye namagatsha e-oregano ukuba banqwenele ukuba bavuyise umtshato wabo. Kamva bafumanisa ukuba isityalo sinokusetyenziswa kwamachiza amaninzi - i-oregano poultices yayisetyenziselwa ukubetha iinambuzane kunye namaqhinga ahlabayo.
Kwezinye izithethe zomlingo, ngakumbi ezo zivela eItali naseMediterranean, indawo ye-oregano isetyenziselwa ukukhuselwa. Abasebenzi bezinye iintlobo ze-Stregheria bayalisa itiye ye-oregano kwaye basebenzise ukuhlamba iindonga zangaphandle zamakhaya, ukudala umqobo wokukhusela kumandla ambi.
I-oregano yokutyala phambi kwekhaya lakho ukuya kwiwadi ngaphandle komlingo ongeyonto , okanye udibanise iingcambu ezimbalwa phezu komnyango wakho wokukhusela. Gcina iibhotile ezimbalwa kwikontraki yakho yekliniki okanye kwigumbi lakho lokulala ukuze uqinisekise ulonwabo kubo bonke abahlala kwikhaya lakho.
I-Osage Orange (iHedge Apple)
Sebenzisa ii-apula ze-hedge, okanye ii-oranges ze-Osage, ukudala umda wemilingo ecaleni kwendawo yakho. I-Credit Credit: Patti Wigington 2013
I-Osage i-orange, eyaziwa nangokuthi i-apula ye-hedge (kunye nakwezinye iindawo, "iibhola zeembombo"), ngumthi okhula eNyakatho Melika, kwaye ufumana igama lawo kwiintlanga zase-Osage zaseMelika ezazisetyenziselwa umthi wazo okhuni ukuze zenze iingodo ukuzingela. "I-orange" ngokwayo ayilona i-orange yangempela (okanye i-apula, ngenxa yolu hlobo) kodwa isiqhamo esikhulu, esicacileyo esingenakulungeleka kunoma ubani ngaphandle koogxa bendawo. Xa iibhola - eziqhelekileyo malunga neekhilomitha ezine ukuya ezintlanu ububanzi-ziwela phantsi, zingenza umonakalo omkhulu, ngoko ngokubanzi kucetyiswa ukuba ukuba utyala i-orange ye-Osage, ngaphandle kokuba ufuna iziqhamo, kufuneka uhlanyele umntu ongenasici imithi.
Oko kwathiwa, ininzi yalezi zikhula kwintlango, kwaye zithandwa kakhulu ekucwangcisweni kwedolophini njengendlela yokudala i-canopies yomthi kunye nendawo eluhlaza kwindawo ezijongene nokungcola komoya okanye umgangatho wehlabathi ohluphekileyo. Akuqhelekanga ukuhamba epakini yedolophu kwaye ufumane ama-orang e-Osage ehla emhlabathini.
Ngoko, unokwenza ntoni ngesiqhamo esingesiqhamo, kwaye asinakudliwa ngaphandle kwamagundane ehlathi? Ewe, unamathuba ambalwa, nangona asikho isityalo esiluncedo kakhulu kubantu abaninzi.
Iphunga le-orange osage ingasetyenziselwa ukwenza idayi ephuzi, ehamba ngokufanelekileyo xa uthanda ukutshiza iimpahla zakho.
I-Osage i-orange ityala lokutshatyalaliswa kwemvelo - ukuwabeka kufuphi neminyango yakho okanye emva kwefenitshala iya kugcina izigulane kunye nabanye abahlaselayo bekhaya. I-apula yamanzi entsha iya kugcina malunga neenyanga ezimbini ukuya kwethathu, kodwa xa ilahlekelwe ngumbala wayo obomvu, uyilahle.
Abahlali bexesha elide batyala i-Osage imithi yelenaranti baza bayenza ibe yinqaba-oku kwakuyi-barbed wire bar cencing, ngenxa yokuba ameva eendoda zesilwanyana yayigcina imfuyo ekudlulileyo kwimida yefama okanye intsimi.
Kwinqanaba lomlingo, makhe sijonge apha ngentla - ukuba i-orange orange iqukethe imichiza egcina abagxeki abangafunekiyo, kwaye isetyenziswe njengesithintelo kwixesha elidlulileyo ngabahlali baseMelika abaqalayo, sinokuyiguqulela njani ukuba sisetyenziswe ngemilingo ?
Kutheni ungaqokeleli iipulale zentambo evela kumthi wendawo, kwaye uzibeke ngokusemgangathweni malunga nepropati yakho? Njengoko wenza njalo, gxininisa ukugcina iindwendwe ezingafunekiyo - zombini isilwanyana kunye nabantu-ebomini bakho. Unokuzifaka kwiitya kunye neebhasikiti ezijikeleze indlu - oku akuyi kusebenza nje njengesicabangqangi kunye nesinambuzane esiphephekayo, kodwa unokwabela iipulale zakho ze-hedge umsebenzi wokuphosa nabani na onokubangela ubungozi okanye ubunzima.
Ukutshala i-Osage izithombo ze-orange ngomgca ojikeleze umjikelezo weyadi lakho. Njengoko baqala ukukhula, bhinqa kwaye bajonge ibe yinqaba. Ungadali kuphela umqobo ongokwenyama kodwa umqobo we-metaphysical, ukwenzela ukuba izinto ofuna ukuhlala kuzo, kunye nezinto ongafuni, ziya kuhlala ngaphandle.
Ukuba kwenzeka ukuba ufumane igatsha eliwa phantsi le-Orange osage, cinga ukuba uyikhange kwi-wand okanye abasebenzi . Imithi yalo mthi inzima kakhulu kwaye iyomelele, kwaye yayisetyenziswa ngabantu baseMerika ukuba benze iingcingo zokuzingela. Naluphi na umgcini okanye abasebenzi abenziwe kuyo kufuneka bahlale ixesha elide, kwaye bangasetyenziselwa kwizifolothi ezinxulumene nokunyamezela, amandla kunye nokuphila ixesha elide.
I-Patchouli ifumaneka kwiintlobo ezininzi zeziqhumiso, kwaye zombini amaqabunga, iziqu kunye namafutha abalulekileyo angasetyenziswa. Umfanekiso kaPatti Wigington 2014
I-Patchouli iyimifuno ethandwayo efunyenwe kwiinkcubeko ezininzi zamandulo zamaTagan. Iphunga layo eliqhelekileyo lisikhumbuza ingqondo, indawo yemilingo, kwaye isetyenziswe rhoqo kwisiqhumiso, imveliso, kunye nokusebenza kwemveli. Njengelungu leentsapho ze-nint, iindawo eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zesityalo zingamaqabunga omisiwe kunye namafutha abalulekile, kodwa ezinye iingcali zisebenzisa iziqu ngokunjalo. Xa ikhulile, isiqithi siya kufinyelela malunga neenyawo ezintlanu ubude, kwaye sihlanganiswe kwiintyatyambo ezimhlophe. Ioli yePatuli isisome kakhulu, kwaye inomsi ococekileyo. Idibene nenxalenye yomhlaba.
Edibene nothando, ubutyebi, kunye negunya lesini, i-patchouli ingasetyenziselwa kwimisebenzi eyahlukeneyo yemilingo. Ukuze wenze umntu abe nomdla kuwe, gqoka i-patchouli oil - isandi eyaziwayo njenge-aphrodisiac. Ukuba unqwenela ukugqoka ioli kwesikhumba sakho - kwaye ioli enamandla kakhulu, ngoko ke kufuneka uhlaziye rhoqo ngaphambi kokuba uyisebenzise esikhumbeni - sebenzisa amaqabunga endaweni yoko. Beka amaqabunga e-patchouli kwi-sachet, kwaye uyithwale ephaketheni lakho okanye ugqoke entanyeni yakho.
Kwezinye izithethe ze- hoodoo kunye nomlingo womntu, isibonakaliso se-dollar sibhalwe kwisiqwenga samaphepha usebenzisa i-oil patchouli. Eli phepha lithathwa kwi-wallet yakho, kwaye oku kufuneka kulandele imali ngendlela yakho.
Kukho ezinye izithethe zomlingo wanamhlanje apho patchouli ixabiswa ngamandla ayo okuguqula. Gcoba iingcango zakho okanye iifestile kunye neoli ye patchouli, okanye amaqabunga ahlakazekile, kwaye uyisebenzise ukugcina iimpembelelo ezingalunganga kwindawo okanye kwindawo yokuzikhusela ngomlingo .
Sebenzisa ioli efunekayo kwiintlobo ezizisa uthando, ukhuseleko okanye ezinye iipropati ezihambelanayo.
I-Patchouli nayo inokusetyenziswa kakhulu kwiziqhumiso. Hlanganisa amaqabunga omisiwe kunye neminye imifuno, kwaye uyisebenzise nge-disc charcoal disc kwisiqhumiso sakho somlilo.
Isiqhumiso Somoya Samhain
Ihlobo loLuthando Lwentengiso
Valter Jacinto / Getty Izithombe
U-Pennyroyal uyaziwa njengomthi wemilingo. Kwamanye amasiko ahambelana nemali, ngelixa kwezinye i-Pennyroyal ixhunyiwe kumandla kunye nokukhuselwa. KwiHoodoo kunye nezinye iindidi zemilingo yaseMerika, uPennyroyal ithathwa ukukhupha "isohlo elibi." I-Cat Yronwoode yeLuckymojo.com ithi itingasetyenziswa ukuphula i-hex okanye isiqalekiso.
Edibene nomhlaba iMarry, uPennyroyal yayisetyenziswe ngabanqwelisi kwixesha lika-Elizabethan ukukhusela ulwandle. Kukholelwa ekusebenzeni ngokucwangcisa iifos kunye namanqwane.
USir James James Frazer wabhala kwi -Golden Bough ethi eMorokota, i-Pennyroyal kunye nezinye izityalo ezinamakha ezitshisiweyo zatshiswa ngobuninzi kwi-midsummer. Uthi abantu bayagxuma kulo msi, "baqhube kwiindawo zokutyala nezityalo," njengendlela yokukhusela isivuno sonyaka kumonakalo. Umsi uqulethe "umgangatho wemilingo osusa intlungu emadodeni, kwizilwanyana, kwimithi yezityalo nakwizityalo."
Ngomnye umlingo wokukhusela, yenza i-sachet enezinto eziphathekayo kunye nePennyroyal uze uyifake kwisikhwama sakho.
Kwizithethe ezimbalwa, uPennyroyal inxulumene nemilingo yemali . Ukuba unomnini shishini, faka i-sprig phezu komnyango ukudweba kumakhasimende kunye nokuchuma. Zama ukwenza ibha yeMali Yesixa ukuhlamba izandla zakho, okanye usebenzise iPenroroyal ukuphucula i-Oil Prosperity .
Qaphela: I-Pennyroyal ingaba yicyhefu kubafazi abakhulelweyo, kwaye akufanele isetyenziswe nayiphi na uhlobo ukuba ukhulelwe. Njengawo onke amayeza, nceda ukhangele ugqirha wakho ngaphambi kokuba usebenzise okanye uyisebenzise.
UDavid Q. Cavagnaro / Getty Izithombe
I-Peppermint isityalo esininzi, esoloko sisasazeka ngaphaya kwemida ejoliswe kuyo. KwimiBhalo kaPliny, utsho ukuba amaGrike namaRoma ahlobisa iitheyibhile zabo zokutya kunye neeprigi ze-peppermint, kwaye ngokwenene bavutha ukutya kwabo. UDioscorides, ugqirha waseGrisi, uyaphawula ukuba wayenemithi yokwelapha, xa ioli yayo yachithwa kwaye isetyenziselwa ukunyanga izidalwa kunye nokuphazamiseka kwenkqubo yokutya. I-Peppermint inokuhlaziywa yiYiputa yamandulo. Ivela kwi-Icelandic Pharmacopoeias malunga ne-1240 CE, kwaye ekugqibeleni yamkelwe ukuba isebenziswe entshona kweYurophu malunga ne-1700s.
Ngethuba leMinyaka Ephakathi, oogqirha-abazaziwa ngokuba yingqiqo yabo-isilwanyana esasetyenziselwa ukuphosa amazinyo abo. Ebudeni bangexesha elifanayo, abacuki baqikelela ukuba amaqabunga amhlophe afafazwe ngeengxube ze-cheese ziza kugcina iiliti ziphuma ngaphandle kwendawo yokugcina.
I-Peppermint iyimvelo evuselelayo, kwaye ebuyela e-Eden , uJethro Kloss uthi kufanele ibe yimiyezo yonke. Uthi i-Peppermint "isilungiso esihle kakhulu se-chills, colic, fever, i-dysentery, i-cholera yenkathazo yenhliziyo, i-chopera yentliziyo, i-influenza, i-grippe kunye ne-hysteria." Isebenza ngokucokisekileyo njenge-astringent, kunye ne-peppermint esebenzayo kwesikhumba inika imvakalelo ehlaziyileyo (zama unyawo lwe-peppermint bath) ekupheleni kosuku olude emsebenzini!).
I-Peppermint, njengamanye amalungu eentsapho zentsapho, ifunyanwa rhoqo kwiMediterranean naseMpumalanga Mpu. Yisebenzise ukulungiselela imvana yonyaka, i-curry, i-couscous, okanye imifuno oyithandayo.
Ukuthetha ngomlomo, i-peppermint isetyenziswa rhoqo ekusebenzeni ukuphulukisa nokuhlanjululwa . Ingatshiswa okanye ihluthwe ngokubhekiselele kwizinto zokuzicoca amandla angalunganga, okanye zigqitywe njenge-elixir okanye itiye ukuzisa ukuphilisa. UPliny waphinda waqaphela ukuba i-peppermint "ivakalisa umvakalelo wothando"; yongezele ukuthanda ukusebenza ukuzisa umnqweno.
Amanye amagama: iLammint, i-Brandy minti
Unokwenza itiye ye-peppermint ethandekayo ngendlela efanayo abantu benza itiye lelanga: Hlanganisa malunga neekomityi ezimbini zeqabunga lamaphepha e-peppermint, uze uzibeke kwi-gallon yamanzi. Vumela itiye ukuba iqhube ngaphandle ngaphandle kwelanga ize ihlangane ngokupheleleyo. Yongeza enye ye-stevia ukuze uyiphumelele ukusela, okanye usebenzise itiye ye-ingqungquthela njengomhlambululi ohlaziyayo ekuhlambeni.
Maximilian Stock Ltd. / Getty Izithombe
I-Purslane yenye yezo zityalo ezizenzekelayo yonke indawo, ukusuka kwimizila yendlela ukuya kwimiyezo ukuya ngaphandle kwimihlathi. Kubonakala kulula ukuyibona, kunye nobomvu obunzima kunye namaqabunga asemagqabini, asemagqabini.
Ukudibaniswa nokukhuselwa, kwaye nakubanye ngokulala, iPurslane isetyenziselwe kokutya kunye namayeza ukususela ngexesha lamaYiputa asendulo. U-Herbalist uNiclas Culpeper wakhuthaza njengonyango yonke into esuka kwi-gonorrhea ukuya ekuhlanjeni ukuya kutshisa umpu. Kuye kwasetyenziswa kwiindawo ezininzi zehlabathi njenge-anti-bacterial agent, kwakunye nokususa umkhuhlane kunye nezinye iimpawu ezithathelwanayo.
Kwi -Herbal Modern , u-Maud Grieve uthi i-Purslane yayiyimpembe yokulwa nomlingo, kwaye ingafakwa ijikeleze umbhede wokukhusela. Kwakhona kwaziwa ngokuba yindlela yokukhusela ngokuchasene nokuhlaselwa kwe-psychic ngexesha lokulala. Kwiindawo zaseAfrika, iPurslane isetyenziselwa ukuhlanjululwa ngexesha kunye nasemva kwemikhosi. Kuyathakazelisa ukuba kukho i-Yoruba folktale apho zonke izityalo ehlathini zenqaba ukuhlawula amatyala abo okugembula - ngaphandle kwePurslane, eyayihlawula imali efunekayo. Ngenxa yoko, ngoku idibaniswe kwezinye iimeko ngokufumana imali eyimali.
Yithwala iPurslane ephaketheni lakho ukuze uzikhusele ekuhlaselweni kwemilingo, okanye uhlale ukhuselekile kwingozi engokwemvelo - kuma-Middle Ages, ngamanye amaxesha amasosha ahlasele i-sprig ye-Purslane kwiinqwelo zabo zokuzigcina zikhuselekileyo ngexesha lomkhosi. Ukutshala i-Purslane malunga nekhaya lakho-ngokukodwa kufuphi nomnyango wakho wangaphambili-ukufaka iipropati zokukhusela kulabo abahlala ngaphakathi. Yiphonkceza phezu kombhede wakho ukuze ulale ubuthongo, ukhululekile.
I-rosemary inxulumene nokukhunjulwa. UJudith Haeusler / Cultura / Getty Izithombe
I-rosemary yayaziwa ngabantu abadala. Kwakuyimifuno eyaziwayo ngokuqinisa imemori kunye nokunceda ingqondo. Ekugqibeleni, kwaye kwahlanganiswa nokunyaniseka kwabathandi, kwaye kwaziswa kwiindwendwe zomtshato njengesipho. Ngowe-1607, uRoger Hacket wathi, "Ukuthetha ngamagunya e-rosemary, iphelela zonke iintyatyambo egadi, ukulawula umntu." Unceda ubomi, luqinisa umlozo, kwaye luyimithi enokwenza intloko. oko kukuchaphazela intliziyo. "
I-rosemmary yayivame ukuhlonyelwa kwiigadi zekhitshini, yaye kwathiwa ibhekise ukulawulwa kwendodakazi yendlu. Omnye wayecinga ukuba ngaphezu kweyodwa "inkosikazi" yonakalisa intsimi yomfazi wayo ukuba aqinisekise igunya lakhe! Esi sityalo sasiyaziwa ngokubonelela ukunambitheka okumnandi kumdlalo kunye neenkukhu. Kamva, yayisetyenziselwa iwayini kunye neengqungquthela, kunye nokuba ngumhlobiso weKrismesi.
Abafundisi baseRoma babesebenzisa i-rosemary njengeqhumiso kwimikhosi yonqulo, kwaye iinkcubeko ezininzi zazijonga ukuba yimifuno yokusebenzisa ukukhusela kwimimoya emibi kunye nabathakathi. ENgilani, yatshiswa emakhaya abo babeswele ngenxa yokugula, bafaka kwiibhokisi ngaphambi kokuba ithuna lizaliswe ngothuli.
Ukusebenzisa umlingo, utshise i-rosemary ukukrazula ikhaya elingenamandla, okanye njengeqhumiso ngelixa ucamngca . Hlanganisa iminyango emnyango wakho wangaphambili ukuze ugcine abantu abanobungozi, njengezigqeba, ukungena. Ukucoca ukuphulukisa ukuphulukisa nge-rosemary eyomileyo ukuxhamla iipropati zayo, okanye udibanise namajikijolo emjunipha kwaye utshise kwigumbi lokugula ukukhuthaza ukuphucula impilo. Nge-spellwork, i-rosemary ingasetyenziselwa ukuba ithathe indawo kwezinye izityalo ezifana nentlaka yokuqhumisa.
Amanye amagama: Ukhula lweCompass, isityalo sePowlar
Uxhumano lwePlanethi: Ilanga
Umfanekiso nge zenaphoto / E + / Getty Izithombe
I-Sage sele isatshiswa ukuze ihlambulule kwaye ihlambulule indawo. Amandulo atshisa ama-sprigs omisiwe asetempile etempileni nakwiimfundiso zecawa. AmaGrike namaRoma abhala ukuba umsi wanikeza ubulumko kunye nengqondo yengqondo. Ngeli-leshumi leminyaka, oogqirha base-Arab bathi i-sage yaziswa ngokungafi, okanye ubuncinci, ubomi obude kunye nobomi. ENgilani, abakhonzi benkulungwane yeshumi elinesixhenxe benkulungwane yasebukhosini basasaza idibansi ye-sage kunye ne-lavender ehlabathini enkundleni ukuze bancede ukuguqula iphunga lemini yemihla ngemihla.
NgokweMithi, uDioscorides uthi i-decoction eyenziwe ngamagqabi kunye namasebe e-sage kunceda ukuqubha kunye neenwele. Uyongezelela ukuba inokukunceda ukuthintela izilonda kunye nezilonda ekutshaleni, ngokunjalo. Kwimithi ebalulekileyo Ebuyela e-Eden , uJethro Kloss uxelela ukuba i-wisdom "enye yezona ndlela zilungelelanisa iingxaki zesisu, i-dyspepsia, igesi kwisisu nangamathumbu ... iya kukhupha iimbungu kubantu abadala kunye nabantwana. Ukuhlanjululwa kakhulu kwizilonda zamandulo kunye nezilonda ... Nesibindi seengcinezelo kunye neengtso. " Ukwacebisa kwakhona ekwenzeni unyango lwezesondo - nokuba ngumnqweno wesondo ogqithiseleyo okanye ukunciphisa i-libido. Ngamanye amazwi, i-sage yinto eninzi kakhulu yokuya kwinqanaba lezityalo ngenxa yezifo ezininzi.
Ngomlingo, sithwala amaqabunga enqabileyo kwisikhwama sakho okanye isikhwama sokukhuthaza ukufumana imali. Ukutshisa amaqabunga ukunyusa ubulumko okanye ukufumana izikhokelo ezivela kwisikhokelo sakho somoya (ukucetyiswa - ukutshisa ukutshisa kufana nohlobo lwegciwane, ngoko gcinani engqondweni xa ucinga ukuba abamelwane banokubuza). Yenza isifiso uze uyibhale kwiqabunga le-sage, uze uyifihle phantsi kwe-pillow yakho-ukuba uyaphupha ngesifiso sakho ngobusuku obuthathu obulandelayo, umnqweno wakho uya kuzaliseka.
Ukongeza kwindlela yokusebenzisa imithi kunye nemilingo, isalathisi yenza ukongeza okongezelelweyo kwikhitshi yakho ekhishini. Yisebenzise ukuze utywine iintlanzi okanye izitya zeenkukhu, okanye ushiye amaqabunga amasha abe ngumvuzo omnandi.
Amanye amagama: I-Garden wisdom
Uxhumano lwePlanethi: Jupiter
Sebenzisa i-wise to make Smudge Sticks , okanye ukuhlambulula indawo engcwele phambi kwesiko.
I-Dinodia Izithombe / Getty Images
Nangona kungenjalo imifuno, kodwa inkuni, i-sandalwood yinto efunyenwe rhoqo kwiimfundiso zamaPagani zanamhlanje. Enyanisweni, "i-sandalwood" iyonke iklasi yezinkuni, efumaneka kwimithi eyingxenye yentsapho ye-Santalum. Ezi zityalo ezinamakha nezixakekileyo zigcwele ipilisi yeoli efunekayo, esoloko ikhutshwe ukuze isebenziswe kwiintlobo ezahlukeneyo zenkcubeko, i-aromatherapy, kunye nakwiyeza.
Enye inhlobo, i-sandalwood yaseNdiya, ekhula ngokuyinhloko eNepal naseningizimu yeIndiya, isityalo esengozini.
Nangona kunjalo, abantu bavuna ukuvuna imithi yeoli efunekayo, kunye neekhilogram enye yeoli ye-sandalwood yinyaniso inokuthengisa i-$ 2,000. Ixabiso elihle kakhulu - kodwa ungakhathazeki, ininzi yeoli ye-sandal edayiswayo e-United States naseYurophu namhlanje ngokuqinisekileyo ivela kwi-sandalwood yase-Australia. Le yintlobo engekho engozini, kwaye nangona ixinzelelo elula ngakumbi kunezinye iintlobo ze-sandalwood, kusengomnandi kakhulu kwaye ithandwa ngabantu abaninzi be-aromatherapists.
Nangona kunjalo ngokuqhelekileyo iintyatyambo ezivunwa kwaye zisetyenzisiweyo, iinxalenye ezininzi zeesityalo ze-sandalwood zisetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, ioli efunekayo isetyenziswe rhoqo kwiyeza elipheleleyo kwiipropati zayo ezichasayo, kwaye abanye abaphandi bavavanya igalelo layo kumdla kunye nezinye izifo. Inkuni ingaba phantsi ibe ngumgubo ococekileyo, kwaye isetyenziselwe unyango lwe-beauty - engeza i-oile ye-rose okanye i-camphor, kwaye uyisebenzise kwesikhumba sakho sokuhlambulula.
I-Sandalwood ineenamba zezicelo zemilingo, kwaye zivame ukuhluka ngokuxhomekeke kwiqela lenkonzo okhangele kuyo.
Kwiinkcubeko ezininzi zePaganism zanamhlanje, zidibene nokuphilisa nokuhlanjululwa . Kwiirhafu zamaHindu, i-sandalwood paste isetyenziselwa ukucwangcisa izixhobo zangaphambili ngaphambi kwemikhosi. AmaBuddha akholelwa ukuba i-sandalwood ingenye yeengcingo ezingcwele ze-lotus, kwaye ingasetyenziselwa ukugcina enye inxulumene nehlabathi eliphathekayo ngelixa ubuchopho buya kuhamba ngexesha lokucamngca. Kumsebenzi we-chakra, i-sandalwood inxulumene nesixhenxe, okanye ingcambu, i-chakra kwisiseko somthunzi. Ukutshisa isiqhumiso kunokunceda ngemiba enxulumene nobuntu, ukhuseleko kunye nokuzithemba.
Kwizithethe ezimbalwa zaseNoopagan, inkuni ye-sandalwood itshiswa njengempepho- ngamanye amaxesha ixutywe kunye nezinye iinkuni okanye i-resin, njenge-myr okanye inkunzi yempepho. Iindlela ezimbalwa zobomi bomntu zidibanisa nazo zombini kunye nokukhusela umlingo. Ungasebenzisa iziqwenga zomthi nge-spellwork-bhala injongo yakho kwi-chip okanye intonga ye-sandalwood, uze uyibeke kwibrazier ukutshisa. Njengoko i-sandalwood yakho iyatshisa, injongo yakho, okanye umnqweno, iya kuqhutyelwa phezulu ezulwini.
Sebenzisa i-thyme ekuphiliseni okanye ekuphumleni. Umfanekiso ngo-Alasdair Thomson / E + / Getty Izithombe
I-Thyme ibizwa ngokuba yi- thymos ngamaGrike, oku kuthetha "fumigate" okanye "umsi". Badibanisa i-Thyme ngobugorha ekulweni, kunye nokubuyiselwa kwamandla emzimbeni. Amajoni aseRoma ayaziwa ukuba ahlambele kwi-thyme decroction ngaphambi kokulwa, ukukhulisa amandla kunye nesibindi. AmaSumeri ayisebenzisa njenge-antiseptic, kwaye eYiputa, i-thyme yayingenye yeemveliso ezazisetyenziselwa kwinkqubo yokumisa. I-Herbalist uNicolas Culpepper uncoma ukusebenzisa i-thyme njengonyango lokukhwehlela.
Kwi -Herb Good , uJudith Benn Hurley uthi ioli efunyenwe kwi-thyme, ebizwa ngokuthi i- thymol , ine "izakhiwo ezichasayo kunye ne-antibacterial properties." Kwakhona ubonisa ukuba i-thyme ithandwa ngabantu abane-aromatherapists ngenxa yokukwazi ukuphilisa izifo zokuphefumula kunye nokukhwehlela.
I-Thyme ingasetyenziselwa kwiziko zokuphulukisa, okanye ukuzisa ukulala okuphumayo. Abasetyhini abagqoka i-thyme kumntu wabo bangenakunyaniseka kumadoda, kwaye baphatha izifrigi kwiifowuni zakho zokukhusela ekuphuhliseni ubuchule bakho be-psychic. Unokwenza umlenze womlingo usebenzisa i-thyme , ukukhupha ukungabi nantoni, okanye ukutshisa esinye kwisitya ukuze uncede ukuqinisa isibindi ngaphambi kokubambana.
Kwezinye iimeko, i-thyme ihambelana nomhlaba we-fae- kuthiwa ngabantu abafana nokufihla kumagatsha asemasimini.
Amanye amagama: I-thyme evamile, i-thyme yakho
Uxhumano lwePlanethi: iVenus
Ugwayi unemisebenzi emilingo neyodwa. Umfanekiso ngokujonga I-Stock / Getty Izithombe
Nangona idumela elibi liyingozi empilweni yakho, iqabunga leguba linempawu ezimbalwa ezintle. Ngaphandle, iqabunga lecuba lingasetyenziswa njenge-antiseptic. Kwake isetyenziswe kwifom ye-enema ukuze kupheliswe izidumbu ze-muscle, kodwa kamva kwawa. Kwi -Herbal Modern , u-Maud Grieve uncoma ukuba kufumaneke iifotyi zamanzi ezifubeni (i-hemorrhoids), okanye zifakwe kwi-suppository ye-hernia ekhethiweyo. Ngezizathu eziqondakalayo, oku kwakungekho unyango oluthatywayo.
Ugwayi wawungeniswa eNgilani ngasekupheleni kwee-1500s nguSir Walter Raleigh, kunye nenkcazo ekhohlakeleyo yokuba abantu bayibhema emibhobho. Le ngcamango yayinomdla kakhulu ngumntu wonke, ukusuka kuKumkani ukuya kuPapa, bonke bathi isicwangciso esiyingozi. Nangona kunjalo, oko akuzange kumise uRaleigh ekubeni enze i-fortune encinci ngecuba, ngenxa yokuba amaNgesi ayezimisele ukuwuthenga. Ngama-seventeen hundred, yayisisithako esikhulu kwisibonelelo ngasinye se-britishist.
Ngenxa yobume bendlela yokufuduka kwabantu, ukusetyenziswa kwecuba kwande kakhulu kwimimandla yeentaba zasempumalanga yeUnited States, kwaye ifunyenwe kwimiba ethile yamasiko abantu. Amaqabunga ecuba ayenziwa rhoqo ukuba ayeke ukuphuma, kwaye kwi-Lowcountry yaseSouth Carolina, ityhufi yaziwa ngokuba yintlungu yentlungu ye-jellyfish.
EMzantsi Melika, iintlanga zaseNdiya zisebenzisa utshayi wocuba ukuze zivumele ukuthetha nomoya. Ingasetyenziselwa ukunqwenela oothixo bomlambo xa ehamba ngesikebhe okanye esikhephe. Kwimilingo yanamhlanje, ityhida ngamanye amaxesha isetyenziselwa njengomnikelo wokuhlonela oothixo, okanye isitshiswa njengesiqhumiso sokuhlanjululwa. Kwiinkcubeko ezininzi zobugqi, iteksi yindawo evumelekileyo kwezinye izityalo.
Sebenzisa iteksi endaweni yeqhumiso kwimimiselo ebandakanya ukunxibelelana kunye nehlabathi lomoya , okanye ukuyifaka kwi-sachet kwaye uyithwale ngexesha lokuhamba uhambo olukhuselekileyo. Ukucoca iqabunga elomileyo lokusila ngaphandle kweminyango yakho kunye neefestile ukugcina amandla angasebenzi ngaphandle kwendlu.
Uxhumano lwePlanethi: iMarto
Nangona kwiingcamango ungatshala kwaye ukhule iteksi lakho, yinkqubo eninzi kakhulu, kwaye izityalo zogwayi zithatha indawo eninzi. Ukuba ukhetha ukuthenga iteksi ekusebenziseni imilingo, kukulungele ukuba ne-tin yalo ukuba usebenzisa * kuphela izizathu zemilingo. Zama ukutshaya iteksi efanayo oyisebenzisayo kwisithethe, ngaphandle kokuba ufumene kwi-pinch kwaye ungenayo enye indlela.
I-Valerian ineendlela ezahlukahlukeneyo zokusebenzisa umlingo - ingasetyenziselwa nantoni na evela kumlingo wothando ukukhusela. Umfanekiso nge dirkr / E + / Getty Izithombe
UValerian wabizwa ngokuba ngugqirha uValerius, ongowokuqala ukusebenzisa isityalo ngamayeza. Ngelikhulu lelishumi elinanye, ii-Anglo-Saxon zihlalutya ukusetyenziswa kwayo ekulwa neenkampu zokuya esikhathini. Kwabizwa ngokuba yi-Amantilla ngexesha eliphakathi, kwaye kukho iresiphi ephakamisa ukusetyenziswa kweeyi eyenziwe "kwijusi ye-Amantilla id est Valeriana," ukuzisa uxolo phakathi kwamaqela alwa. I-Chaucer ibhekisela kwisityalo njenge Setwall.
Ngokwesiko, i-valerian yayisetyenziswe ngokuphindaphindiweyo kwiyeza kunokuba imilingo, kodwa kusekhona ezinye izinto ezisetyenziselwa yona kwi-spellwork.
I-Valerian inokuvumba ixhala, kodwa iyaziwa njengesityalo sothando kunye nokukhuselwa . Yibani ekhayeni lakho ukukhusela iintlekele zemvelo, ezifana nombane okanye umlilo. Ukuba ungumfazi, phonsa i-sprig kwi shirt yakho ukuheha amadoda ngendlela yakho. Iimvumba zingasombululwa kwikhaya ngokubeka amaqabunga e-valerian malunga nomjikelezo wendlu.
Ukuba ulwa nelungu lentsapho, zama ukubeka i-sprig ye-valerian kwikona nganye kwikhaya lakho. Ukubeka phezu kwendlu nganye kuya kuthintela ingxabano nokunganeliseki ukungena - kodwa lumkiso - abanye abantu bakufumanisa ukuba iphunga le-valerian libabakhumbuza umchamo wekati.
Amanye amagama: Zonke izifo, iHeliotrope, izityalo zaseSt George, i-Amantilla, i-Setwall
Uxhumano lobuThixo: Aphrodite, Venus
Ukuba ungumgadi wegadi, i-valerian ithambekele ekutsaleni imihlaba yomhlaba, eyona nto ingcono kumhlaba wakho. Oku kuhambelana namanqanaba e-phosphorus eziveliswe zizimpande zezityalo, ngoko ke ukuba ufuna udaka olunzulu, tshala i-valerian.
Kukho iintlobo ezingaphezu kwezi-200 zeentyantyambo kwiintsapho ze-violet. Umfanekiso nguAnette Jager / Getty Images
Ngokutsho kukaMadi Grieve's Herbal Modern , kukho iintlobo ezingaphezu kweebini ezimbini zeentyantyambo kwiintsapho ze-violet. Oku kushiya indawo eninzi yokuchazwa xa kuvela kwimisebenzi yemilingo. Siza kujonga ii-violets ngokubanzi, ngaphandle kokungena kwiinkcukacha malunga namalungu athile osapho.
Kwimbali yamaRoma, i-violet yokuqala yaphuma egazini elichithile likaThixo uAttis, owazibulala ngenxa kaCybele, unkulunkulukazi ongumama . Kwezinye iimbali, iJupiter yatshintsha umthandi wakhe, Io, ibe yinkomo ukuze amkhusele kwiJuno - kunye neziqhumane zakhula entsimini ukuze u-Io abe nokutya. Kukholelwa ukuba igama elithi violet empeleni linciphisa i- Viola , okuyiyona nto i-Latinozed variant ye-Io.
Nangona iimbali zayo zidibanisa nokuba zithixo kwaye zithixo, namhlanje i-violet idibene nokuthula nokuthula . Iqabunga linika ukhuselo ebubini, kwaye linokungcwatywa kwi-pillow okanye sachet kwintsana entsha. Thatha iipalesi kunye nawe ukuzisa inhlanhla nokukhuthaza umlingo wobusuku.
Lezi ntyatyambo ezintle ezimnandi zikhona yonke into entwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo, ngoko yithuba eligqibeleleyo lokwenza imbali yamathambo. Dry iintyatyambo kwilanga, uze uwasebenzise kwisiqhumiso sokuqhumisela ukuzisa amaphupha amnandi kunye nokulala okuphumayo. Usenokufuna ukuwagcoba umlotha njengePlay Pillow yethu .
Thatha isikwere se-muslin okanye i-cotton, kwaye ubeke isiqwenga se-violets esanda kutyunjwa kuso. Ukubopha isikwere uze uxhomeke phezu kwefabhethi yakho kwibheji. Sebenzisa amanzi ashisayo, kwaye uvumele isitya ukuba sisasaze isiphunga esimnandi samathambo. Sebenzisa oku njengokuhlamba , ukuhlambulula ngaphambi kokuba wenze imicimbi okanye upelo.
I-violet idibene nokuzinikezela kunye nokunyaniseka . Ukuba ufuna ukuba umthandi wakho abe ngonaphakade kwaye anyanisekile, nikela isiqwenga se-violets njengesipho - okanye utyala ipaki phambi kwekhaya lomntu!
Ukongezelela ekubeni ngumlingo, iifoletshi yenye yezityalo ezininzi ezidliwayo onokuzifumana kwintlango okanye kumyezo wakho. I-Violets inokutsalwa - ixesha lidla, kodwa umphumo wokugqibela uyamthandeka - okanye uphuze ube ngamanzi, iviniga, okanye i-tea.
I-Grieve ithi enye ye-seventeenth century bookbook ichaza ukusetyenziswa kwei-violets ukwenza isiraphu esiphunga:
"Thatha ubuninzi beBlew Violets, qhafaza abamhlophe uze ubafake kakuhle kwi-morter stone; Emva koko uthathe amanzi asemgangathweni amanzi njengokuba uza kulungelelanisa ngokufanelekileyo kwaye udibanise neViolets; baxinze bonke; kwaye kuyo yonke i-halfe pint yotywala ibeka enye ipondo yeyona nto iswekile; uyibeke emlilweni, ubeke ushukela njengokuba unyibilikisayo, uyashukumisa; vumela u-boyle kodwa kanye kanye okanye kabini kuninzi; ngoko uyisuse emlilweni, kwaye uyigcine ekusebenziseni kwakho. Le miniver sirrup yaseVuolets. "
Chris Burrows / Getty Izithombe
U-Yarrow wayevame ukubizwa ngokuba nguWoundwort okanye uKnight's Milfoil, ngenxa yokusetyenziswa kwonyango lokulimala. I-Highlanders yaseScotland bayisebenzise ukwenza ioli yokuphulukisa, kunye ne-Orkney Islands, i-yarrow isetyenziselwa ukwenza itiye "ikhupha i-melancholia." UMnu Grieve usitshela kwi -Herbal Modern ukuba amaRoma ayibhekisela kuye ngokuthi i- herba militaris , isityalo sejoni. Abaqeqeshi baseFransi kwi-Middle Ages babesazi ukuba i-yarrow isebenze kakuhle kwenzakalo kwiminwe nangezandla-enyanisweni, kwezinye iindawo zaziwa ngokuba "ingcambu yababazi."
Ukongezelela ekusebenziseni kwayo kwenzakala ukulimala kwe-tissu, i-yarrow yaziwa ngokusemthethweni njengombutho onxamnye nomkhuhlane. Ininzi yezizwe zaseMelika zaseMelika zisebenzise kwii teas ezinikezwa abagulayo, ukuzisa ukushisa komzimba phantsi. E-Indiya, itiye ebizwa ngokuba yi- gandana inikwe abagulayo ukunyusa ukujuluka, ngaloo ndlela iyanciphisa umkhuhlane.
I-Yarrow ingasetyenziswa kwimisebenzi yemilingo ehlobene nokuphilisa, uthando, nesibindi. Yigqoke kumntu wakho ukukhulisa ukuzithemba kwakho kunye nesibindi, okanye uqhube i-yarrow eyomileyo esandleni sakho ukuyeka ukwesaba. I-sprig exhomekeke phezu kombhede womtshato iqinisekisa iminyaka engama-7 yothando kunye nothando. Ukuthatha ibhola lokuhlamba kunye ne-yarrow kunokukunceda ukwandisa ubuchule bakho be-psychic. Ingasetyenziselwa ukukhupha amandla angalunganga ukusuka kwindawo okanye umntu.
Ukuba usebenza kwindlela yokuphilisa umntu ogulayo, cinga i-yarrow eyomileyo njengeqhumiso , okanye ufake i-sachet ye-yarrow phantsi komlotha womntu ukuzisa ukulala okuphumayo.
Amanye amagama: Achillea, Ingubo kaMantombi, iWoundwort
U-Yarrow unomdla okrakra, kodwa ungasebenzisa zombini amagqabi kunye neentyantyambo ekuphekeni. Amaqabunga ngokwabo, aphezukileyo kunye nesigxina, asinqunyulwa, atyunwe ngejisi lemon kunye netyuwa kunye nepilisi, kwaye akhonze mhlawumbi kwi-saladi okanye ngesitya sehlobo se-seafood. Ukuba unqwenela ukuyidla, zama ukubeka iierrow iiflethi kwisitya kwaye ungeze amanzi aphelayo kuyo - wabeka ubuso bakho phezu kwayo kwaye uvumele i-yarrow ukuba ivule i-pores yakho.
Qaphela: abafazi abakhulelweyo akufanele bathathe i-yarrow ngaphakathi, kwaye akufanele kusetyenziswe ukuphuma kwegazi.
Isingeniso kwiNdawo yokuKhusela
Umlingo, iMbali, kunye neNkcubeko yeSandwood
Kusemthethweni: Ukuya kwePosi yiSifo
Iintlobo eziqhelekileyo zokuzaliswa koBuntu
Kutheni i-UN iingcali zixhaswa yiNdlela yabasetyhini e-US
Izixhobo zamachiza kunye neeMfazwe
Kutheni i-Planet yeMercury ibumnyama kangaka?
I-Pinyon Pine, Umthi obalulekileyo eMntla Melika
Juz '4 yeKur'an
Imbali Yombhoxo: Umda wexesha
Ukunqoba umntu weVirgo
Funda ngeBlue Button Jelly
Iingcaphuno ezivela kuPapa Francis kwi-Racism, Xenophobia nase-Immigration